I-China Vula Uhlobo lweFayibha yeLaser yokusika Umatshini yoMvelisi kunye noMthengisi | Guo Hong
Ipleyiti yokusika i-Laser
I-Tube I-Laser Ukusika Umatshini
Plate Kwaye Tube Laser Cutting Matshini
Tube Ukuzenzekelayo Ukutyisa i-Laser Ukusika Umatshini
Laser Welding Machine Welding ngesandla
Laser Baza, Ibhedi
Umgangatho weLaser Aluminium Beam
Uhlobo Open Fibre Laser Cutting Matshini
Uhlobo Open ifayibha laser ukusika umatshini, umatshini yonke yamkela inkqubo yokubeka kunye pinion drive, ngokukodwa eyenzelwe zonke iintlobo iimakhishithi zesinyithi. Kulula kubasebenzisi ukuba basebenze kwaye bagcine. Kwangelo xesha, inkqubo yendibano engqongqo iqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo komatshini ngokuchaneka okuphezulu. Optical ifayibha laser ukusika umatshini ukubonelela abasebenzisi ngesakhono sokusika esinamandla kunye nokusebenza kwezixhobo zangaphandle zebanga eliphezulu, nto leyo lukhetho olufanelekileyo kubasebenzisi ukwenza uhlobo lwezoqoqosho.
Uhlobo Open ifayibha laser ukusika umatshini
Ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo
Indawo yearuminiyamu egantry
I-aluminium ye-aerospace yenziwe phantsi kwemigangatho ye-aerospace. Emva kokuguga okungeyonyani kunye nonyango lwesisombululo, kugqityiwe. Ukuqina kunokufikelela kwi-T6, kwaye ineempawu zokuqina okuhle kunye nokuhamba kakuhle.
Ukukhanya ngokobunzima, ukulungele ukuhamba ngesantya esiphezulu ngexesha lokulungiswa, kwaye kubhetyebhetye kakhulu. Inokunyusa kakhulu isantya sokuqhubekeka xa kuchanekile.
Intloko ye-laser yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ngokuhambelana netekhnoloji ephezulu. Yomelele kwaye yomelele. Inokuphumeza umlinganiso "okwi-intanethi" ngexesha lenkqubo yokuvelisa, kwaye umlinganiso uchanekile kwaye ukhawuleza.
IKhabhinethi yoLawulo eziMeleyo
Onke amacandelo ombane kunye nomthombo we-laser akhelwe ngaphakathi kwikhabhinethi yolawulo oluzimeleyo kunye noyilo olungenaluthuli ukwandisa ubude bexesha lezinto zombane.
Ikhabhathi yolawulo ixhotyiswe ngesixhobo somoya sokushisa okuzenzekelayo rhoqo.Oku kunokuthintela ukonakaliswa kobushushu obugqithisileyo kumalungu ehlobo.
Uyilo ukhuko Plate ukuwelda
Umbhede wamkela i-web evulekileyo yokudibanisa iprofayili ye-welding eqinisekisiweyo yaqinisekiswa yi-CAE. Ukufakwa kobushushu obuphezulu kunye nokuguga kwendalo zisetyenziselwa ukuphelisa uxinzelelo lwewelding, ukuthintela ukuvela, ukunciphisa ukungcangcazela, kunye nokuqinisekisa ukusika ngokuchanekileyo
Umthombo weLaycus laser
Oyena mvelisi weLaser udumileyo emhlabeni. Amandla okusika anamandla, ukusika ubukhulu bephepha lesinyithi kunokufikelela kwi-80mm. Umgangatho we-boram ogqwesileyo kumandla aphezulu. Ukusebenza okuphezulu kokuguqulwa kombane, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, kunye neendleko zokugcina eziphantsi
Umzekelo womatshini GHJG-3015, GHJG4015, GHJG4020, GHJG-4025
Indawo yokusebenzela 1500x3000mm, 1500x4000mm, 2000x4000mm, 2500x4000mm
Ubukhulu. Isantya sokuhamba 120m / min
Isantya esikhawulezayo 1.2G
Ukubeka indawo ngokuchanekileyo ± 0.03mm
Ukuphindaphinda ± 0.02mm
Amandla asebenzayo I-1000W-6000W
Ukusika ngobuchule 1.High
Isantya 2.High kunye nokusebenza * Ulondolozo Low
4.Imeko yokusebenza eluhlaza kunye nekhuselekileyo
Iwaranti yeminyaka emi-5.3
Inkonzo yeeyure eziyi-6.24 kwi-intanethi
Ixesha lobomi inkxaso yobugcisa.
Egqithileyo Ifakwe ngokupheleleyo i-Fibre Laser Ukusika Umatshini
Okulandelayo: Itafile yokuTshintshana yeFayibha yeLaser yokusika
cnc ixabiso lokusika i-laser
cnc umatshini laser
ifayibha cnc laser
ifayibha laser iindleko
ifayibha laser abasiki
Ifayibha laser umatshini wokusika umthengisi
Umatshini wokusika we-laser uyathengiswa
iindleko laser umatshini ahlabayo
i-laser cutter yesinyithi iyathengiswa
ifayibha laser ukusika umatshini omncinci
Ifomathi enkulu eThunyelwe ngokuTshintshiseneyo ngeTafile yoLuhlu ...
Itafile yokuTshintshana yeFayibha yeLaser yokusika
Umatshini wokusika oMbane oMandla oPhezulu
Umatshini wokusika weFiber Laser
Ifakwe ngokupheleleyo i-Fibre Laser Ukusika Umatshini
Umda A, iPaki yezeMveliso yoBunjineli, i-Binhu Avenue, iZowuni yeTekhnoloji ephezulu, iPizhou, kwiPhondo leJiangsu